Waso Learn မှ National Representative အဖြစ် ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်သွားမည့် Entrepreneurship World Cup 2020 နှင့် ပတ်သက်၍ Strategy First University မှ Managing Director ဦးအောင်ချစ်ခင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
ပြိုင်ပွဲကို ဘယ်လိုရည်ရွယ် ချက်နဲ့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တာပါလဲ?
ပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်ဖြစ်သွားတာကို ပြောရမယ်ဆိုရင် COVID ကာလ မတ်လကုန် ကျွန်တော်တို့ Strategy First University က သင်တန်းတွေပိတ်ရတဲ့ အချိန်မှာ SFUx ဆိုတဲ့ Online ကနေဗီဒီယိုနဲ့ သင်ကြားမှုတွေ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ (၂) လအတွင်းမှာ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ထောင်ကျော်ရဲ့အားပေးမှုကို ရရှိတဲ့အခါ ကျောင်းတွေ ပိတ်ထားရတဲ့ အခြေခံပညာအတန်းတွေ တက်ရောက်နေတဲ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေ အတွက်လည်း တစ်ခုခုလုပ်ပေးဖို့စဉ်းစားမိပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ကလေးတွေ ပညာရေးအတွက် Waso Learn – ဝါဆိုလန်း Application ကို လူမှုအကျိုးပြု လုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့ ဇွန်လဆန်းမှာ စတင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အစက အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်ရေးအတွက် တစ်ဘာသာတည်းလုပ် ပေးဖို့ စဉ်းစားခဲ့ပေမယ့် ကျောင်းတွေမဖွင့်နိုင်သေးတဲ့အတွက် ဘာသာစုံအတန်းစုံလုပ်ပေးဖို့ မိဘတွေ၊ ဆရာ၊ ဆရာမတွေက တောင်းဆိုကြတဲ့အတွက် ဝါဆိုလန်းက အခုလိုဆောင်ရွက်ဖြစ် သွားတာပါ။ ဒီ project က လုပ်နေပြီးသားလည်း ဖြစ်တယ်။ ကလေးတွေစာသင်နှစ်မှာ အဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့စီစဉ်နေပြီးသား ဖြစ်တဲ့အတွက် Business Plan တွေကတော့အဆင်သင့်ရှိနေပြီးသားပေါ့။ ပွဲအတွက်ပါဝင်တဲ့အခါ သူ့ရဲ့လိုအပ် ချက်လေးတွေနဲ့ကိုက်ညီအောင်လို့ ပြန်ပြီးတော့ Presentation တွေ ဘာတွေပြင်ရတော့ လုပ်ရင်းနဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးကအခြေခံပညာ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေရဲ့ ပညာရေးအတွက် ပိုမိုအဆင်ပြေ ကောင်းမွန်စေချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ဖြစ်ခဲ့တာပါခင်ဗျ။
Entrepreneurship World Cup 2020″Myanmar National Winner ရရှိခဲ့တဲ့အပေါ် ဘယ်လို ကြိုးစားခဲ့ရလဲ?
ကျွန်တော်တို့ Application ကတော့ အခုလက်ရှိ အနေအထားနဲ့ အသင့်တော်ဆုံးလည်း ဖြစ်သွားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါလူမှုအကျိုးပြုလည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်။ ကျွန်တော်တို့ Application ကတော့ Grade 1 ကနေ 11 အထိပေါ့၊ ဒီနှစ်စာသင်နှစ်မှာသင်ယူရမယ့် သင်ခန်းစာတွေ အကုန်လုံးပေါ့လေ၊ ဘာသာစုံ၊ အတန်းစုံသင် ခန်းစာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့က တကယ်ဆရာ၊ ဆရာမတစ် ယောက်ချင်းဆီက သင်ကြားပေးနေတဲ့ အတိုင်းဖြစ်အောင် ဗီဒီယို သင်ခန်းစာလေးတွေကို အခန်းလိုက်ရိုက်ထားပါတယ်။သင်ခန်း စာတွေကို Application ကနေ ရုပ်ပြကာတွန်းတွေ၊ သင်ထောက် ကူပုံလေးတွေ၊ သင်ခန်းစာနဲ့ပတ် သက်လို့ သက်ဆိုင်ရာပြင်ပဗီဒီ ယိုလေးတွေနဲ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေ လေ့လာနိုင်အောင် တင်ပေးပါတယ်။ အဲ့ဒီလို လုပ်ပေးနိုင်အောင်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ Waso Learn အဖွဲ့သားတွေအကုန်လုံးက သူ့တာဝန်နဲ့သူ အဆင်ပြေပြေ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြရပါတယ်။ ဆရာ၊ ဆရာမ တွေကလည်း အကောင်းဆုံးသင် ကြားပေးကြတယ်၊ ဗီဒီယိုရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့သားတွေကလည်း အလင်းအမှောင်ကအစ၊ Sound Quality တွေကိုရော ဂရုတစိုက် ဖမ်းယူကြတယ်၊ Video Editors တွေကလည်း အကောင်းဆုံးသင် ခန်းစာ Video တွေကို ကလေးတွေလေ့လာနိုင်အောင် အကောင်းဆုံး တည်းဖြတ်ပေးကြ၊ Administrative staff တွေကလည်း ကိုယ့်တာဝန်ကို အကောင်း ဆုံးဖြစ်အောင် ချိတ်ဆက်ဆောင် ရွက်ကြတယ်။ ဒါတွေ အားလုံးစု ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ ပြိုင်ပွဲမှာ National Winner ရစေတဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေ ဖြစ်သွား ခဲ့တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
နိုင်ငံကိုယ်စားပြုသွားရောက် ယှဉ်ပြိုင်ရမယ့်အပေါ်မှာလဲ ဘယ်လိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါသလဲ?
National Representative အနေနဲ့ သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရမှာဆိုတော့ အစစအရာရာ ပိုကောင်းအောင်ပြင်ဆင်ရတော့မှာပါ။ Quality ပိုင်းဆိုင်ရာရော၊ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော အကောင်း ဆုံးကြိုးစား အားထုတ်ရမှာပါ။ Global Level မှာက နိုင်ငံအသီးသီးက အတော်ဆုံးတွေ ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြုအနေနဲ့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် အစစအရာရာပေါ့၊ National Level မှ ာယှဉ်ပြိုင် ခဲ့စဉ်ကထက် ပိုကောင်းတဲ့ Application Quality, Video Quality, Content Quality, ပိုပြီးစနစ်ကျတဲ့ Operation System တွေကို ကြိုးစားပြင်ဆင်ပါမယ်။ Team Member တစ်ယောက်ချင်းဆီကလည်း ကိုယ်တာဝန်ယူထားတဲ့ အပိုင်းကိုယ်စီကို အရင်ကထက် ကောင်းမွန်အောင်၊ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် တာဝန်ယူဆောင်ရွက် သွားကြမှာပါခင်ဗျာ။
အခုလိုယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရတဲ့အတွက် ခံစားချက်လေးကို ပြောပြပေးပါ?
အခုလိုမျိုး Entrepreneur-ship World Cup 2020 ပြိုင်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရတာ အတွေ့အကြုံ တစ်မျိုးရရှိတာပေါ့နော်။ ပြီးတော့ Entrepreneurship World Cup Platform ရဲ့ နိုင်ငံတကာ သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ အကဲဖြတ် စစ်ဆေးတာဆိုတော့ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ Waso Learn Application အတွက်လည်း လက်တွေ့မှာ အထောက်အကူ အများကြီးဖြစ်စေပါတယ်။ National Winner အဖြစ် ဆုရရှိပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအနေနဲ့သွား ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရတဲ့အပေါ်မှာလည်း အတိုင်းမသိ ဝမ်းသာဂုဏ် ယူမိပါတယ်။ နောက်တစ်ဆင့်မှာက ဒီ့ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အတွေ့အကြုံအသစ်တွေ၊ ကိုယ့် Application ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ရယ်၊ ကလေးတွေ ဒီ Application နဲ့ သင်ခန်းစာတွေ သင်ယူကြတဲ့အခါမှာ ပိုပြီးအဆင်ပြေပြေ သင်ယူနိုင်အောင်လို့ လိုအပ်ချက်တွေကို ပြင်ဆင်နိုင်မယ့် အခွင့်အလမ်းတွေ ရရှိမှာလည်းဖြစ်လို့ ဝမ်းသာရင်ခုန်တာပေါ့ ခင်ဗျာ။
ပြိုင်ပွဲမှာရော ဘယ်အတိုင်း အတာအထိ မှန်းထားပါလဲ?
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ပထမဦးဆုံး Global EWC 2020 Top 100 Global Finalist ရွေးချယ်ပွဲကို အရင်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရမှာပါ။ အဲ့အဆင့်ကို ကျော်ဖြတ်ပြီး Top 100 Global Finalist ထဲ ပါဝင်သွားပြီဆိုရင် Entrepreneurship World Cup 2020 မှာ ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ National Level ကို ကျော်လွန်ပြီး နိုင်ငံတကာမှာ ယှဉ်ပြိုင်ရတော့မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပိုပြီးခက်ခဲတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေ၊ နိုင်ငံတကာက အတော်ဆုံး အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ရင် ဆိုင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တင်မက နိုင်ငံတကာက ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတိုင်းကတော့ အားလုံးကိုကျော်ဖြတ်ပြီး Winner ဆုကို ရရှိလို ကြတာပါပဲ။ အဲ့ဒီအတွက် ကျွန်တော်တို့ Waso Learn က တတ်စွမ်းသလောက် အစွမ်းကုန် ကြိုးစားအားထုတ်သွားမှာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုပြီး ပြိုင်မှာဆိုတော့ လက်ရှိ ရှိနေတဲ့ app မှာ ထပ်ပေါင်းထည့်ပြီးတော့မှ ထပ်ပြိုင်မှာလား လက်ရှိ App အတိုင်းပဲ ထပ်ပြိုင်မှာလား?
နိုင်ငံကိုယ်စားပြုပြီး ပြိုင်ရတော့မှာဆိုတော့ လက်ရှိ Application ထက် အဘက်ဘက်က ပိုမို ကောင်းမွန်အောင်ကြိုးစားသွားမှာပါ။ သင်ခန်းစာဗီဒီယိုတွေကိုလည်း အခုတင်ထားတာထက် ပြည့်စုံအောင် ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာ သင်ရိုးညွှန်းအားလုံးအပြီးအထိ Application မှာ ထည့်သွင်း ပေးသွားမှာပါ။ ရှိပြီးသား Video တွေကိုလည်း ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ Quality ရရှိစေဖို့ Update and Polish လုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။
ထပ်မံပြီးသာ အနိုင်ရရှိခဲ့မယ် ဆိုရင် Waso Learn အနေနဲ့ ဘာတွေ ထပ်ပြီးပြုလုပ်သွားဖို့ ရှိပါသလဲ?
ထပ်မံအနိုင်ရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ အတိုင်းမသိပေါ့ဗျာ။ အနိုင်ရရှိမယ်ဆိုရင် Waso Learn အနေနဲ့ ပြိုင်ပွဲကနေရရှိခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံတွေ၊ ဆုကြေးငွေတွေ၊ media awareness တွေ အစရှိသဖြင့်ပေါ့၊ အဘက်ဘက်ကနေ အခုထက်အများကြီး ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ဆောက်ရွက်နိုင်မယ့် အခွင့်အရေးတွေ အများကြီးရရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့အတွက် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေအတွက် Waso Learn Application ကိုသုံးပြီး သင်ယူတဲ့ အခါမှာ အဆင်မပြေမှုတွေ လုံးဝမရှိအောင် လုပ်ပေးသွားမှာပါ။ အခုဆိုရင်လည်း ဆရာ၊ ဆရာ မတွေအတွက် Waso Learn Teachers’ Application ကို လုပ်ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်လို့ ဆုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် အဲ့ Application ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မှာပါ။ တစ်နိုင်ငံလုံးက ဆရာ၊ ဆရာမတွေ၊ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေအတွက် အကောင်းဆုံးကြိုးစားရင်း ပရဟိတ အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်း ပညာရေးပံ့ပိုးမှုတွေ ပိုမိုလုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံအခြေခံပညာရေး ကဏ္ဍကို တတ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံးပံ့ပိုးကူညီသွားမယ်လို့ စဉ်းစားထားပါတယ်။
Waso Learn အကြောင်းလေးလဲ ပြောပြပေးပါဦး?
Waso Learn Application ကတော့ ပထမဦးဆုံးကျွန်တော် ပြောသွားတဲ့အတိုင်း လူမှုအကျိုး ပြုစီးပွားတစ်ခုပါ။ ကျွန်တော်တို့ Application က Grade 1 – 11 (တစ်တန်းကနေ ဆယ်တန်း)ပေါ့ နော်၊ အဲ့မှာ ဒီနှစ်စာသင်နှစ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ သင်ခန်းစာတွေ အကုန်လုံးကို ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေက Waso Learn Application ကနေတစ်ဆင့် Download လုပ်ထားလို့ရတယ်၊ အခါခါပြန်ကြည့်လို့ရတယ်၊ လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေ လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ အဲ့လိုမျိုး ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားတာပါ၊ ဒီနှစ်ဆိုရင်ကျွန်တော် တို့စာသင်ချိန်တွေ အများကြီးဆုံးရှုံးသွားတယ်၊ ပြန်ဖွင့်ဖို့လည်း အခက်အခဲတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတော့ ဒီ application လေးကရေရှည်မှာ သုံးလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ ဈေးနှုန်း ကလည်း မူလတန်းနဲ့ အလယ်တန်းအတွက်ဆို တစ်နှစ်လုံးမှ ၅,၀၀၀ ကျပ်၊ အထက်တန်းဆိုရင် ၉,၀၀၀ ကျပ်ပေါ့နော်၊ အဲ့လိုနှုန်းလေးတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့က ရောင်းပေးတဲ့အတွက် လူမှုအကျိုးပြုပုံစံနဲ့ ကျွန်တော်တို့က သွားတာပါ။ ဒီနှစ်လို မိဘတွေရော၊ ကလေးတွေရော၊ ဆရာ၊ ဆရာမတွေရော စိတ်ပူနေကြတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒါလေးက အထောက်အကူ ဖြစ်သွားစေချင်တာပါ။ အားလုံးလည်း ဒီ Application လေးကို အသုံးပြုပြီး အဆင်ပြေသွားကြမယ်လို့ မျှော် လင့်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။